Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Jönköpings län / Gislaved
Degmada Gislaved waxaan dhahnaa in waxkasto noo dhow yihiin. Dabiicada, aamusnaanta iyo xasiloonida. Laakin sido kalena dhawaansha dhaqanka, isboortiga iyo nolol firfircoonida dibada oo aan qani ka nahay.
1,221 kiilomitir oo laba jibaaran
Borås 68 kiilomitir
Halmstad 90 kiilomitir
Degmada Gislaved waa qeeyb ka mid ah gobolka Gnosjö ee Småland, waa gobol lagu yaqaan jawiga shirkadeed. Degmada waa mid uu fiican reerka oo lehna daryeel waayeel iyo daryeel caruur oo soo horeeyo.
Ururka samafalka guriyeed ee gobolka Gislaved waxuu hayaa ku dhawaad 2 600 oo guri, oo kuu faafsan 8 xafadood ee gudaha degmada.
Af soomaali, af carabi, SKB (afka seerbiya, afka koraariya, afka boosniyo) af finish, afka albaaniyo, afka isbaanishka, afka greek waxeey ka mid yihiin luuqadaha ugu weeyn oo looga hadlo degmada. Dad badana waxeey ku hadlaan af faarisi, af dari iyo afka sawaaxiliga.
Dugsi xanaaneedka ee degmada san laheeyn waa la heli karaa. Degmada Gislaved waxaa sido kale fursad loo lee yahay xanaaneeyn caruur ee habeneed, saq-dhexe iyo sabtiga-axada.
Sido kale waxaa laga heli karaa xarun-reereed. Taasi waa howl loogu tala galay waalidiinta dhamaantooda iyo qofka waalid noqon rabo. Xarunta-reerka waa goob lagu kulmo oo qofka waalidka ah ama noqon rabo waalid uu fursad ugu tahay in uu xariir sameeyn san karo, talo kale heli karo, aqoon iyo tageero ku saabsan waalidnimada.
17 dugsi hoose-dhexe ayaa ku yaalo Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar och Reftele. Dugsiyada badankoo waxey sido kale lee yihiin fasalka ebaaraadka.
Dugsi sare ayaa ku dhex yaalo degmada Gislaved. Marka la dhiganaayo Dugsiga sare ee Gislaved fursado badan ayaa la heli karaa, qof kastana wax uu xiseeyo ayaa ka jiro. Barnaamijyo badan oo kala duwan ayaa lagu bandhigaa.
Adiga ah, soo galooyti goor dhaw yimid, waxaad markasto fursad uu lee dahay in aad barato luuqada iswiidhiska. Degmada gudaheeda waxaa lagu soo bandhiga barashada luuqada iswiidhiska ee ajnabiga iyo maadada barashada bulshada. Waxbarashada luuqada sanadka dhan wee socotaa.
In kasto ee xaafadaha degmada ee yaryihiin, waxaa markasto fursad loo heli karaa in waxbarashada la sii wato. Degmada Gislaved waxeey gudaheed ku soo bandhiga jaamacad. Haddii la doonaayo in waxbarasho lagu dhigto dugsiga dadka waa weeyn, midka ugu dhaw waxuu ku yaalaa Värnamo, oo ku dhawaad 40 kilomitir uu jirto Gislaved.
Haddii la doonaayo in la dhigto jaamacad, waxaa soo jiidasho leh jaamacada Jönköping, jaamacada borås iyo jaamacada Halmstad ku taalo. Basas iyo tareemo loo raaco ayaa jiro magaalooyinka la soo sheegay.
Gudaha degmada Gislaved waxaa ku yaalo afar rug caafimaadeed oo ku yaalo Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar iyo Reftele. Sido kale Gislaved waxaa ku taalo qaabilaad dhalin yaro.
Daryeel caafimaadka dumarka waxuu ku yaal sadax xaafadood oo ku yaalo degmada.
Degmada waxeey lee dahay adeeg-turjumaan oo gaar ah. Adeegaas-turjumaneedna waxaa laga helaa 90-100 luuqadood. Adeega-turjumaanka waxuu soo bandhiga turjumaan qolka dhex joogo iyo mid qadka-telefoonka ku jiro.
Jönköpings Länstrafik ayaa ku howl gasho gaadiidka guud ee degmada Gislaved. Degmada waxeey lee dahay xariir bas iyo tareen fiican oo tago xafadaha kala duwan ee degmada, iyo sido kale magalooyinka xoogaa ka weeyn sidii Jönköping, Värnamo, Halmstad, Borås iyo Göteborg.
Tusaalaha waqtiga safarka baska:
Gislaved - Smålandsstenar ku dhawaad 25 daqiiqo
Gislaved - Jönköping ku dhawaad 1 saac och 20 daqiiqo
Gislaved - Värnamo ku dhawaad 1 saac
Tusaalaha safarka tareenka ilaa Halmastad, Borås iyo Göteborg
Smålandsstenar - Halmstad ku dhawaad 1 saac
Hestra - Borås ku dhawaad 40 daqiiqo
Hestra - Göteborg, ku dhawaad 1 saac och 40 daqiiqo
Shaqooyinka ka banaan gudaha Gislaved